स्थल चिनारी खै ? – News Portal
June 3, 2019 epradeshLeaveaComment on स्थल चिनारी खै ?
दाङमा पर्यटकीय स्थलहरू धेरै रहेका छन् । दाङको वस्तुस्थिति हेर्दा सबै प्रकारको पर्यटकीय गन्तब्य यहाँ देखिन्छ । त्यसको लागि विकास प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पर्यटकीयस्थलको चिनारी गराउन सकेमा र सबैलाई जानकारी दिन सकेमात्रै जिल्ला पर्यटकीय विकास हुनेछ । प्रचार र चिनारी भएन भए कामले हैन नामले मात्रै पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने हुन्छ । पर्यटकहरूलाई बोलाउन सकिदैन ।
न त विकास नै हुन्छ । र सधै ओझेलमा परिनै रहन्छ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि साना–साना कुरामा ध्यान मात्रै दिन सक्ने हो भने त्यो सबैभन्दा बढी फलदायी हुने देखिन्छ । जिल्लाको हकमा अहिलेसम्म त्यो लागू भएको देखिएको छैन ।
पर्यटकीय स्थलको तथ्यांक मात्रै राख्नुभन्दा पनि त्यसको उचित प्रचारप्रसार गर्नसके त्यो ठाउँ सबैको गन्तब्य बन्न सक्छ । त्यसतर्फ सरोकारवालाहरू लाग्न सक्नुपर्छ । त्यो चिनारी, ब्यवस्थापन, जानकारी त्यसतर्फको गाम्र्भीयता पर्यटकीय क्षेत्रमा हुन सकेको छैन ।
प्रदेश नम्बर ५ पर्यटकीय गन्तब्यको रूपमा रहेको छ । पर्यटन ब्यवसायको सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । प्रदेशका १२ वटै जिल्ला पर्यटनको उच्च सम्भावना छ । वर्तमान अवस्थामा पनि प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलहरू रहेको क्षेत्र हो प्रदेश नम्बर ५ ।
तिनको सम्वद्र्धन र विकासमा मात्रै केही कमी भएको देखिन्छ । राज्यले त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरेर पनि उचित संरक्षण र विकासमा ध्यान नदिदा केही कमी भएको महसुस हुनु स्वभाविक छ ।
पर्यटन विकासको लागि भनेर करोडौं रुपैयाँ त बर्षेनी छुट्याइएकै हुन्छ तर त्यसको सही सदुपयोगमा प्रश्न पनि बर्षेनी नै उठ्ने गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारदेखि सडक निर्माण प्राथमिकता बजेटको देखिन्छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि करोडौ रूपैयाँ खर्च गरेर योजना बनाईनु राम्रो हो । तर सबै रकम ठूला योजनाका लागि मात्रै महत्व दिइन्छ र सामान्य र सानातिना तर महत्व राख्ने विषय योजनामा गौण हुँदा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि अभाव खट्किरहेको हुन्छ । सरोकारवालाले त्यो अभाव टार्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य तर महत्वपूर्ण विषयमा भने अधिकांश क्षेत्रमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । पर्यटक सरोकारवाला र राज्यले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
पर्यटकीय क्षेत्रको चिनारीका लागि प्रयोग गरिले लोकेशन म्याप र संकेतहरु जिल्लाका अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरूमा देखिदैनन् । यो विषयमा ध्यान दिनसके सहजैरूपमा जो कुनै पर्यटक स्थलसम्म पुग्ने हुन्छ ।
त्यसतर्फ ध्यान दिएर अरू संरचना बनाउँदा त्यो पनि बनाउने योजना ल्याउनु राम्रो हुन्छ । राज्य र पर्यटन सरोकारवालाहरूले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । र पर्यटकीय स्थलको चिनारी दिन सक्नुपर्छ ।